छिन छिनमा थकान महशुस हुन्छ ? हुनसक्छ प्रोटिनयुक्त खानाको कमी ! – Krazy NepaL
April 9, 2021 401
कोही मनिस काम गरेर थाक्छन त कोही कामै नगरी थकाई महसुस गर्छन। शरीरमा उर्जाको कमी हुँदा थकान महसुस हुन्छ।
यसैले शरीरलाई उर्जावान बनाई राख्नका लागी प्रोटिनयुक्त खाना आवश्यक पर्छ। दिनभरी थोरै थारै पानी या कुनै पनि तरल पदार्थ पिइरहनु आवश्यक हुने चिकित्सक बताउँछन्। पानीले शरीरको हानीकारक तत्व बाहिर फालेर शारिरीक प्रणालीमा नयाँ उर्जा थपिदिन्छ। स्वस्थ र स्फूर्त रहन सर्वत, फलफुलको रस, नरिवलको पानी, आदि पिउनु आवश्यक हुन्छ।
तन्दुरुष्त रहनका लागी प्रटिनयुक्त नास्ताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ। कार्बोहाइड्रेटले शरीरमा उर्जाशक्ति थपिदिन्छ। त्यस्तै सुन्तला मौसम लिची खानु आवश्यक हुन्छ। किनकी यसमा प्रचुर मात्रामा ग्लूकोज हून्छ।
दुधमा मह राखेर पिउदा पनि शरीरमा राम्रो उर्जा मिल्छ। सबभन्दा आवश्यक कुरा यो छ कि ७ ८ घण्टा सुत्नु वा निदाउनु पर्छ जसले गर्दा अघिल्लो दिनको लागी प्रयाप्त ऊर्जा मिलोस। जब थकान महसुस हुन्छ तब १५ २० मिनेट बिश्राम लिनुपर्छ।
Prevगर्भावस्थामा महिलाले झेल्नुपर्छ यस्ता समस्या, कसरी पाउने राहत ?
Nextबिष्णु माझी सार्वजनिक नहुनु र उनको अर्को फोटो नबन्नुको कारण यस्तो रहेछ
ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्ने यी हुन घरेलु उपायहरु,